12 Qodob Oo Aad Ku Dhisi Karto Tarbiyada Caruurtaada - Daryeel Magazine
1. In ilmaha marka uu dhaso Nadaafadiisa si fiican loo daryeelo si uu hadhaw caafimaad fiican u helo.
2. In la siiyo cuntooyin vitamin leh inta uu ku jiro muddada korniinkiisa kaas oo kolba da’da uu maraayo uu u baahan yahay cunto u gaara taasi waxay ka caawinaysaa maskax ahaan iyo jidh ahaanba in uu si fiican u koro.
3. In ishiisa iyo dhagtiisaba laga ilaaliyo waxyaabaha xun xun sida, cayda, film, heesaha iyo xanta.
4. In la baro sida wax loo cuno sidii Nabiguba (scsm) uu inanka yar u baray sida cuntad loo cuno ee uu yidhi ku bilow magic alle dhanka ku xigana ka cun.
5. In labaro sida nidaamsan ee guriga loo joogo iyo dhaqan wanaaga.
6. In lala saaxiibo ilmahaaga.
7. Baro asaxaabtiisa haddii ayna ahayn qaar u qalma ama akhlaaqdiisu ayna wanaagsanayan si fudud uga dhaadhici sidii uu uga hadhi lahaa.
8. Bar xaqa uu dadku ku leeyahay iyo ka isaga lagu leeyayahay marka aad la hadlaysidna kala hadal meel uu wax ka fahmi karo oo tusaalayaal la arki karo tus.
9. Uga sheekee dadka wanwanaagsan iyo asaxaabtii Nabiga (sc) iyo bulshada uu markaas la noolyahay dad fiican oo ka dhex muuqda siday heerkaa ku gaadheen.
10. Waani oo ka caawi in marxalad kasta oo noloshiisa ka mid ah sidii uu kaga gudbi lahaa iyo wixii kala gudboon sababtoo ay tahay adiga ayaa hore u soo maray wadadan sidaa darted waad garanaysaa wixii dhib kaaga timid iyo sidii loo xalin lahaa.
11. Ogow ilmahaagu wiil iyo gabadhba marka uu qaangaadho in uu mid kastaaba u baahan yahay in aad si gaara ula dhaqantid una sharaxdid waxyaabaha cusub ee noloshiisa ku soo biiray.
12. Ka ilaali in ilmuhu uu ku maqlo adiga oo wax caayaaya, xaqiraaya, been sheegaaya isagana ha ku samayn intaas midna.
10 Qodob Oo Kaa Caawinaya Inaad Caruurtaada Ka Dhisto Dhanka Maskaxda Sida Ugu Fiican Ee Aad Ku Garan Karto In Ilmahaaga Uu Hayo Madax Xanuunka Dhan-Jafka Ah Baro Qaababka Aad Lacagta Kusoo Gasha Wax Uga Dhigan Karto, Kharashkaagana Si Caqli Ku Dhisan U Xakamayn Karto 5 Tallaabo Oo Aad Kusoo Jiidan Karto Qofka Aad Jeceshahay